“သံပုရာသီး တစ်လုံးရှိရင်ဖြင့်´´ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » “သံပုရာသီး တစ်လုံးရှိရင်ဖြင့်´´
Posted by ခင်ခ on Apr 3, 2013 in Health & Fitness | 21 comments
သံပုရာသီးဟာ သွားကို ဖြူစေပါတယ်။ သံပုရာသီးအခွံကိုဆား (တကော်စာ)နဲ့ ရောပြီး ပွတ်ပေးရင် သွားကို ဖြူစေရုံတင်မကဘူး။ တောက်ပစေပါတယ်။ ခံတွင်းအနံ့ မကောင်းတာလည်း ပျောက်စေပါတယ်။ သွားကိုက် နေရင်လည်း သံပုရာရည်နဲ့ ပလုတ်ကျင်းပေးပါ။
ငှက်ပျောသီးမှည့်တစ်လုံးကိုယူပြီး ချေပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် သံပုရာရည် တစ်စက်နှစ်စက် နဲ့ ချေထားတဲ့ ငှက်ပျောသီးတို့ကို ရောစပ်ပေးပါ။ပြီးရင်တော့ မျက်နှာ နဲ့ လက် ကို လိမ်းပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသားအရေကို ချောမွေ့ သန့်ရှင်း စေပါတယ်။
နောက်တစ်နည်းကတော့ ပျားရည်တစ်ဇွန်း (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း) ကို ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဆီနဲ့ရောပေးပါ။ ပြီးရင် သံပုရာရည်တစ်စက် လောက်နဲ့ ထပ်ရောပြီး လက်တွေ၊တံတောင်ဆစ်တွေ၊ ခြေဖနောင့်တွေနဲ့ ကြမ်းထော်နေ တဲ့နေရာတွေကို လိမ်းပေးပါ။ လိမ်းပြီးရင် ဆယ်မိ နစ်လောက် စောင့်ပေးပါ။ သံပုရာသီးဟာ အရေပြား အလှ အပ အတွက်အကောင်းဆုံးပေး စွမ်းစေနိုင် တဲ့ သစ်သီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသ ဖြင့် ဝက်ခြံနဲ့ ယားနာတွေ ကို ပျောက် ကင်းစေ တဲ့သတ္တိရှိပါတယ်။ မှဲ့ခြောက်တွေကိုလည်း ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ သံပုရာရည် နဲ့သာ လိမ်းပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သံပရာသီးအခွံနဲ့ ပွတ်ပေးပါ။ ပြီးရင်ရေနဲ့ ဆေးပေးပါ။ နည်းနည်းတော့ကြာပေ မယ့် အရေပြားကို သန့်စင် သွားပြီး တောက်ပြောင်ဝင်း လက်လာ ပါလိမ့်မယ်။ တချို့ အသားအရေတွေဟာ မှောင်မှောင်မှိုင်းမှိုင်းနဲ့ ခြောက်ခြောက်သွေ့ သွေ့ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အရောင်အဝါ လင်းလက်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ လတ်လတ် ဆတ်ဆတ် သံပုရာသီး တစ်လုံးရဲ့ အရည်နဲ့ မျက်နှာမကျန် ခန္ဓာကိုယ် အနှံ့ အိပ်ရာမဝင်ခင် ပွတ်လိမ်းပေးပါ။ မနက်ကျမှ ရေချိုးပေးပါ။ အရေပြားကို တောက်ပြောင်ရွှန်းလဲ့စေပြီး နူးညံ့စေပါတယ်။ အိပ်ရတာ စေးထန်းထန်း နဲ့ မအိပ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ ရေချိုးတဲ့အခါမှာ ချိုးမယ့်ရေထဲ သံပုရာရည်တစ်ခွက်တစ်ဝက်ခန့် ထည့်ပြီး အဲဒီ့ ရေနဲ့စိမ်ချိုးပေးပါ။
သံပုရာသီးစိတ် (သို့) သံပရာရည်ကို ရေထဲရောပြီး လက်ကိုစိမ်ပေးပါ။ လက်သည်းမှာ ပေနေတဲ့ အစွန်းအထင်း တွေကို ချက်ခြင်းချေ ချွတ်ပေးသွား ပါလိမ့်မယ်။ပြီးသွားရင် လက်သည်းကို ပြန်ဆိုးမယ်ဆိုရင်လည်း ပိုပြီးတော က်ပြောင် လာပါလိမ့်မယ်။သံပုရာရည်ထဲ လက်သည်း ခြေသည်းကို ဆယ် မိနစ်ခန့် စိမ်ပေးပါ။ ပြီးလို့ရှိရင် ဘရက်ရ်ှနဲ့ လက်သည်း၊ ခြေသည်းကို ပြန်ပွတ်တိုက်ပေးပါ။ ပြီးမှ ရေနွေး နွေးနဲ့ ဆေးကြောပေးပါ။ ဒီနည်းဟာ လက်သည်းကို သန်စွမ်းစေပြီး တောက်ပြောင်စေပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဗင်နီဂါဖြူ ဇွန်းဝက်ခန့်နဲ့ရေနွေး တစ်ဝက် တို့ ရောပြီး ဘရက်ရ်ှနဲ့ တိုက်ပေးရင် ပိုကောင်း ပါ တယ်။
သံပုရာရည်တစ်ခွက်စာ (ကော်ဖီခွက်တစ်ခွက်စာ)၊ သစ်ဂျပိုး(အနံ့အတွက်)၊ သံလွင်ဆီ နှစ်ဇွန်း (စားပွဲတင်ဇွန်း)၊ နွားနို့လေးပုံတစ်ပုံ (ခွက်တစ်ခွက်)၊ ရေသန့် (ရေကို သင့်တော်သလို ထည့်နိုင်ပါတယ်၊ အနည်း၊ အများ အရေးမကြီးပါ) တို့ရောစပ်ပေးပါ။ တကယ်လို့ သစ်ဂျပိုး မသုံးချင်ဘူးဆိုရင် တခြားအနံ့ ပစ္စည်းတို့ သုံးနိုင် ပါတယ်။ နှင်းဆီပွင့်ချပ် တို့ဖြင့်လည်း အစားထိုး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးရော စပ်ပြီးရင်တော့ အဲဒီ့ အရည် ကို ခြေထောက်စိမ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးသွားမှ ရေနဲ့ ဆပ်ပြာ (Mild) နဲ့ သေချာဆေး ကြောသန့်စင်ပေးပါ။ တစ်ပတ်လောက် လုပ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ခြေထောက် အသားအရေဟာ သိသိသာသာ ချောမွေ့လာပါ လိမ့်မယ်။
ပူပြင်းခြောက်သွေ့တဲ့နွေရာသီလို ဥတုမျိုးမှာ ချွေးထွက်သက်သာအောင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ရင်ပူသက်သာ အောင်လုပ် ဖို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် သံပုရာ သီးရည်ကို ပျားရည်တစ်ဇွန်းနဲ့ရောပြီး သောက်ပေးပါ။ သွေးလေလည်ပတ်မှုကို ကောင်းမွန်စေရုံမျှမက ချွေးထွက်ခြင်းကိုလည်း သက် သာစေပါတယ်။ သံပုရာသီးထဲမှာ ပါရှိတဲ့ ဂလူးကိုစ့် နဲ့သတ္တုဓာတ်တွေကြောင့် ခန္ဓာ ကိုယ်ကို ချွေးထွက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးတဲ့အပြင် အေးမြအောင်လည်း စွမ်းဆောင်ပေး ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်က ဂျာနယ်တစ်စောင်မှာ ဒီဆောင်းပါးကို ဖတ်မိရင်း အော် သံပုရာသီးရဲ့ ကောင်းကျိုး က ဒီလောက်ရှိနေတာ၊ နောက်ပြီး နေရာ တိုင်းမှာလည်း သံပုရာ သီးကို လွယ်လွယ်ကူကူ ရနိုင်တယ်၊ ရေးကူး ထားမှပဲ ဆိုပြီး ဒိုင်ယာရီထဲမှာကို ကူးထားပြီး သွားလေရာကို ယူသွားတတ် ပါတယ်၊ အခုတော့ ဘာရယ်မဟုတ်၊ ကျန်းမာရေး လိုက်စား သူ တွေအတွက် တစုံတခု အသုံးတည့်မယ် ထင်လို့ မှတ်တမ်း အဖြစ်တင်ပြ လိုက်ပါ၏။
(မူရင်း – နှင်းဆီဖူးလေးများ)
ဖတ်ဖူးခဲ့တဲ့ တိုလီမိုလီစာပေစုထဲက သံပရာသီး တစ်လုံးရှိရင်ဖြင့် အလွယ်တကူလုပ်လို့ရနိုင်တဲ့ နည်းလေး တွေမို့ မျှဝေမှု့တစ်ခုပါ။
မိန်းခလေးဘဲဖြစ်ဖြစ် ယောင်္ကျားလေးဘဲဖြစ်ဖြစ်… အလှအပကို မြတ်နိုးတတ်ကြတာ သဘာဝပါ… ဒါ့ကြောင့်
ဗိုက်ခေါက်ထူဗိုက်ပူပြီး အဆီ များနေသူတွေအတွက် လက်တွေ့ ၇ ရက်အတွင်း သိသိသာသာ ဗိုက်ချပ်ပြီး အဆီကျစေတဲ့ဆေးနည်းလေးကိုမျှဝေလိုက်ပါတယ်…
ဆေးနည်းက အလွန်လယ်ပြီး အကုန်အကျလည်း အလွန်သက်သာပါတယ်… အိမ်မှာရှိတတ်တဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေကို
ရောစပ်ပြီးအသုံးပြုရမှာပါ.. ပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကတော့… သံပုရာသီး၊ အုံးဆီ၊ ဆေးပူ(ဒဏ်ကြေလိမ်းဆေး) တို့ကို
သံပုရာသီး တစ်လုံးရဲ့ ၅ ပုံ တစ်ပုံလောက်ကို လှီးပြီး… အကြမ်းပုဂံလုံးထဲကို အရည်ညှစ်ပါ… အကြမ်းပုဂံလုံးထဲသို့
အုံးဆီသုံးလေးစက်လောက် ထည့်ပေးပါ… ထို့နောက် …. ဂဠုန်ရာဇာ/မိဂသီ/ရှမ်းရိုးမ/လင်ဇီး(လိမ်းထေည့်ဆး)တစ်
မျိုးမျိုးကိုတစ်ခါလိမ်းစာ အနေတော်ထည့်ပြီး… မွှေပေးပါ…
ညအိပ်ယာဝင်ခါနီးတိုင်း…… ဆေးကို ရင်ခေါင်းမှ ၀မ်းဗိုက်သို့ အထက်မှအောက်သို့ ဆွဲချပြီး အသားထဲစိမ့်ဝင်အောင်
ပွတ်လိမ်းပေးပါ… ခါးတွင်အဆီရှိပါက ခါးမှ ချက်သို့ ပွတ်လိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်… တစ်ပါတ်အတွင်း သိသာစွာ…
ဗိုက်ချပ်လာသည်ကို…လက်တွေ့… တွေ့မြင် ခံစားရမှာပါ…(ယခုမိတ်ဆွေ.. ၃ /၄ ယောက်လောက်မှ လက်တွေ့
လိမ်းနေပြီး… ကျေးဇူးတင်ကြောင်း.ထောက်ခံချက်ပေးလာသောကြောင့်… သူငယ်ချင်းတို့ကို မျှဝေလိုက် ပါတယ်)
မှတ်ချက်- ညစာကို ပုံမှန် ထက်.လျှော့စားပေးရင်ပိုပြီး သိသိသာသာ ဗိုက်ချပ်စေပါတယ်…တစ်ပါတ်အတွင်း
သိသိသာသာ အဆီနှင့် အခေါက်များ လျှော့ကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်၊
ဟုတ်ပါတယ် ကိုယ်တိုင်သုံးဖူးလို့ ဒီနည်းလေးကို သဘောကျနေတာ ..
ဒါပေမယ့် တစ်ပတ်လောက်လိမ်းပြီး ရပ်ထားလိုက်တော့ ပြန်ပြီး အဆီတတ်ပြန်ရောဗျ …
အဲတော့ နေ့တိုင်းလိမ်းပေးရမလိုဖြစ်နေတယ်… အစားအသောက်ကလည်းမလျှော့နိုင်လေတော့ …
အော် အနိစ္စ … :hee:
ခါးလှည့်ကွင်းနဲ့ ကစားကြည့်ပါ .. တကယ့်ကို ကျတယ် … ။
အစပိုင်းတော့ .. လှည့်လျှင် လည်မှာ မဟုတ်သေးဘူး .. အကျင့်မရှိသေးတာကိုး ။
တဖြည်းဖြည်း လေ့ကျင့်ရင်း … တော်တော် အဆင်ပြေလာတာ တွေ့ ရပါလိမ့်မယ် .. ဇွဲ ရှိဖို့တော့ လိုပါတယ် ။ တချို့ကလည်း တရက် နှစ်ရက်လောက်နဲ့ လုပ်တတ်တယ် … တချို့ကလည်း လနဲ့ချီတာတောင် မလုပ်တတ်ဘူး … ။ ကိုယ့်အားထုတ်မှုပေါ် မူတည်ပြီး …. အချိန်ကြာတတ်ပါတယ် ။
ရှဲရှဲ ပါ ညီမရေ …
ညီမပြောတဲ့နည်းကိုပဲ ခုလေ့ကျင့်နေပါတယ် …
နှစ်ပတ် သုံးပတ်ပဲ ရသေးတယ်..
လာရောက်မျှဝေမှု့အတွက် ၀မ်းသာပါတယ် ကီလိုဇူးလူးဝီစကီရေ။
ကနဦး မန့်ခြင်းအတွက်လည်း ကျေးဇူးနော်။
ကော်မန့်က ထပ်သွားတယ်။ ပြင်လို့ရလား။
၀ီစကီ ဆိုတော့ မူးလောက်ပြီး ထပ်ရှာတာပေါ့နော်။
သတိထားမိတဲ့ချိန်က ရုံးဆင်းမလို့ log out လုပ်နေပြီမို့ ပြန်ပြီး တစ်ခါ ရွာထဲ ပြန်ဝင်ရလို့ ခဏကြာသွားတယ် sorry ပါနော် ကီလိုဇူးလူးဝီစကီ ရယ်။
အပေါ်ဆုံးက ၂ပိုဒ်ကို သေချာမှတ်သွားပြီဗျို့ 
ကွမ်းသမား ဆိုတော့က အသုံးဝင်မှာပဲ
အသဲမကောင်းလို့ အယ်လဖာဖီတိုပရိုတိန်း တက်နေသူများ ပျားရည်နှင့်သံပုရာရည်ရောသောက်ပါ။ ကိုယ်တွေ့ အယ်လဖာဖီတိုပရိုတိန်း ၁၂ မှ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာဘူးသည်။
ဒို့ က အသားအရေ ခြောက်ပြီး အမဲခြောက်ဖုတ် မျောက်ရုပ်ဖြစ်နေလို့ ကူးသွားပြီးဗျို့
မှတ်သားစရာလေးတွေ တင်ပေးထားလို့ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်
she` she` for share.
သံပုရာသီးဆို ဒီက ငရုတ်သီးနဲ့ သုတ်စားရတာလောက်ဘဲ သိတာ
သံပ၇ာသီး ရဲ့ ကောင်းကျိုးလေးတွေ..သိရတော့.. ဗဟုသုတလည်း ရ..
မိုက်တယ် .. မိုက်တယ် …
သံပရာသီး အကျိုးဆက်က အားဂျီးဘဲနော့ …
ကျုပ်ကတော့ သွားအတွက် ပိုသုံးမိမလားပဲ ..
ကွမ်းသမား မို့လေ ..
စကားမစပ် ကွမ်းချိုးတွေ ဘာနဲ့ဆို ပိုပြောင်ဒုန်းဂျ …
ကွမ်းချိုးတွေ ပြောင်ချင်တယ်ပေါ့ ဟုတ်လား။
တိုင်းရင်းဆေးညွှန်းက ဖီးကြမ်းဌက်ပျောသီး အခွံအတွင်းသားနဲ့ တိုက်ရင်ပြောင်နိုင်တယ်ဆိုပေမယ့်
အကောင်းဆုံးနည်းလေး အကြံပေးလိုက်မယ် သွားကုသမှု့ ဆရာဝန်ဆီသွားပြီး
ကွမ်းချိုးတွေ စက်နဲ့ ခြစ်ပစ်လိုက်ပေါ့ ပြီးရင်ကွမ်းမစားနဲ့တော့ ပြောင်မှပြောင်ဘဲဗျာ။
အရင်ဆုံး တိုင်းရင်းဆေးနည်းနဲ့ စမ်းကျိအုံးမယ်ဂျာ ..
အိုက်ဒါနဲ့ မရဒေါ့မှ ..
သွားဆရာဝန် ဆီ ပြေးရမှာဘဲ …